एक निजी समुद्र तट संग कालो समुद्रमा सस्तो बोर्डिंग घर, पौंडी पोखरी
सुझावहरू यसको समुद्री समुद्री किनारमा एक सस्तो पेन्सन र पोषण
कालो समुद्रमा पेन्सन मूल्यहरू खाडी, समुद्र तट र पूल
हताशमा उत्तम होस्टलहरू: वर्षका मूल्यहरू - पावर आपूर्ति
कोस्टल परिवार रिसोर्ट कोठाहरूमा रिसाइनाका लागि मूल्यहरू:
सबै! र अझ बढी
आराम ब्यालेन्स र गतिविधि
कहाँ कालो समुद्रमा आराम गर्न सस्तो छ?
तातो गर्मी, लामो-प्रतीकात्मक छुट्टीको सुरुवात, धेरै जसो नागरिकहरूले भरिदका कंक्रीट मेगालोपोलिपहरू छोड्न र त्यहाँ छोड्छन्, जहाँ न्यानो अजुर समुद्र र दिमागको शान्ति दिनुहोस्। जे होस्, यो अक्सर हुन्छ कि उपयुक्त होटल वा होटेलको खोजीले धेरै समय लिन्छ। विशेष गरी गाह्रो छ कि परिवारलाई इष्टतम विकल्प छनौट गर्न गाह्रो छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, पेन्सन कालो समुद्रमा निजी समुद्र तटमा पूर्ण हुन्छ।
मध्यको दक्षिण तट परिवारका बिदाको लागि एक उत्तम स्थान हो। यहाँ सबै कुरा छ: भूमध्य मौसम, न्यानो समुद्री, स्वादिष्ट परिदृश्य। यसका ठाउँहरू यी ठाउँहरू सँधै आस्ट्रोट र कलाको कला आकर्षित भएका छन्।
आवासको लागि कालो समुद्री तटमा बोर्डिंग घर छनौट गर्दै, तपाईंले निम्न खानाको लागि ध्यान दिन आवश्यक छ:
यदि तपाइँ बच्चाहरूसँग पारिवारिक छुट्टीको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले खानाको साथ कालो समुद्री निवृत्तिभरण छनौट गर्नुपर्दछ, जुन निम्नलिमहरू छन्:
सानो लाठी को गाउँमा, जुन एल्सीको नजिक अवस्थित छ, तपाईंलाई कालो सागरमा एक अविस्मरणीय छुट्टीहरू खर्च गर्न आमन्त्रित गर्दछ। हामी हाम्रा पाहुना, उत्कृष्ट सेवा र विभिन्न स्वादिष्ट खाना प्रस्ताव गर्दछौं। यसका साथै एल्स्ट्तालाको हल्का मौसम, भूमध्यसागरीनसँग मिल्दोजुल्दो छ, आरामले आरामलाई धेरै सहज बनाउँदछ र पौडी खेल्ने मौसम।
बिहानको खाजामा थप ठाउँको लागत 1,4500 रूबल छ। प्रति दिन 1 वयस्कको लागि।5देखि 12 वर्षका बच्चाहरूको लागि अतिरिक्त ठाउँको लागत 1125 रूबल छ। अधिकतम उपलब्ध स्थानहरूको संख्या मूल्य सूचीमा संकेत गरिन्छ।0देखि years बर्षको बच्चाहरु समावेशी छन् थप ठाउँ प्रदान नगरी राखिएको छ।0देखि years बर्ष उमेरका जवान पाहुनाहरू नि: शुल्क बच्चा खाट छन्। कोठा लक्जरी सोफस, शयन कक्षहरू।
* * यस श्रेणीमा (दुई-स्टोररी कुटीज,bबेडरूम कुटीज, भान्छा र सौना) ब्रेकफास्टहरू मूल्यमा समावेश हुँदैन। पाहुनाहरूले आफैंलाई तयार गर्न सक्छन् फूचनमा सुसज्जित फ्लासहरूमा समायोजन।
*** महत्त्वपूर्ण! मूल्यमा मूल्यहरू अनौपचारिक रूपमा संकेत गरिन्छ र वर्तमान मितिका लागि मूल्य भन्दा फरक हुन सक्छ। हालको मितिमा मूल्य निर्दिष्ट गर्न, आरक्षण मोड्युल प्रयोग गर्नुहोस् र अनुरोध गरिएको मितिहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा स्पेस बेडरूम विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। वर्तमान मूल्य कायम गर्न, आरक्षण र पूर्वचित्रण गर्न आवश्यक छ।
होटेल "कोस्ट" एक सानो लाइटहाउस ठूला एल्स्तोमा अवस्थित छ। 2021 को लागि मध्यम मूल्यमा सर्वश्रेष्ठ होस्टलहरू प्रायः कोठाको लागतबाट छुट्टिन्छ र छुट्टिनुको खाना दिन्छ। यो खाजा वा डिनर (ब्रेकफास्टहरू (ब्रेकफास्टहरू (ब्रेकफास्टहरू (नाफाको खाजामा समावेश गरिएको) को कुटीर 33 33 को अपवाद बाहेक, मुख्य ठाउँहरूको मूल्यमा समावेश गरिएको छ)। गर्मी साप्ताहिक बुफेट मेनू तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्।
बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूका लागि खानामा नि: शुल्क प्रदान गरिएको छ (सँगैको वयस्कको भुक्तानी पोषणको अधीनमा)। Minutes देखि 12 देखि 12 बर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि (ब्रेकफास्ट, खाजा, खाजा र डिनर) एक% 0% छुटको साथ प्रदान गरिन्छ (सँगै 1 बच्चाको प्याक पट्टि प्रदान)
तथ्या .्कका बारे तथ्या with ्कका करीव 700% पर्यटकका करीव 700% पर्यटकहरू बच्चाहरूसँग परिवारहरू छन्। सँगै राष्ट्रिय यात्रा अपरेटरको साथ, रसियामा सब भन्दा चाखलाग्दो बच्चाहरूको एक सूची - जो एक ठूलो परिवार आराम गर्न रुचाउँछन् र अनावश्यक समस्या मनपर्दैन।
<< p> सबै समावेशी - राम्रो, र अल्ट्रा सबै समावेशी राम्रो छ! रूसी कालो समुद्री तटमा, यस ढाँचामा बाँकी अलेमान परिवार रिसोर्ट स collection ्ग्रहमा मात्र होटलहरूको नेटवर्क मात्र हो। ती सबै एकै अवधारणामा काम गर्छन्, उच्च-गुणवत्ता र कुनै पनि उमेरका बच्चाहरूसँग रिसरित विश्राममा उन्मुख हुन्छन्। मनोरन्जन र क्रियाक यहाँ यति धेरै छन् कि त्यहाँ मिस गर्ने समय छैन।
खाना: 07:00 देखि 00:00 देखि 00:00 देखि, मध्यवर्ती शक्ति स्टेशनहरू (बार्बेक्सन, पिज्जा, फलफूल र मादक पेय पदार्थहरू, गैर-मद्यपान, दु: ख, निवासीहरू , बच्चाहरूको डायल गर्नुहोस् विशेष मेनू र उपकरणहरूको साथ (डायलरहरू र बोतलहरू, ब्लेडरहरू, आदि)।
पूर्वाधार: एक्स्गर र आउटडोर पोखरीहरू, स्म्याक क्षेत्रहरू, वयस्क केन्द्रहरू, वयस्कहरू र बच्चाहरू, खेल मैदानहरू, वार्षिक रूपमा, वार्षिक क्षेत्रहरूको लागि गेमन क्षेत्रहरू।
मनोरन्जन: प्रत्येक दिन, प्रत्येक होटेलका बच्चाहरु, वयस्कहरू र परिवारका लागि2----0 क्रियाकनहरू छन्; साँझको शो, रूसी ताराहरूको सहभागिता सहित।
बच्चाहरूको लागि: बच्चाहरूको क्लबहरू "विकी-चिका" (1-, -1-7, -12, -12 वर्ष), खेल मैदान, सुईको काम, अंग्रेजी: अंग्रेजी , नाच, ब्लग गर्दै, आदि।)। विशेष - "पेशाको स्कूल"।
छुट्टी, जहाँ त्यहाँ एक नि: शुल्क मिनेट छैन, सबैका लागि उपयुक्त छैन। यस अवस्थामा, यो अधिक आरामदायी वातावरणको साथ होटलहरू छनौट गर्न लायक छ, जहाँ सक्रिय र शान्त मनोरञ्जनको बीचमा सन्तुलन प्रतिरोध गर्न सजिलो छ।
<< p> त्यस्ता होटेलहरू, हरियो क्षेत्रहरू, हरियो क्षेत्रहरू, पौंडी पौंडी पोखरी, बच्चाहरूको क्लब र खेलहरू पूर्वाधारहरू, वयस्कहरू र बच्चाहरूको लागि सन्तुलित एनिमेसन प्रोग्राम।
slapyana * *, Anapa (सबै समावेशीहरू) * आवास विकल्पहरू - बालकको खेल क्षेत्र * बच्चाहरूको डिब्लोमेन्ट * सबै बच्चाहरूका लागि खुला पोखरीहरू * खुला पोखरीहरू छन् वयस्कहरू, साँझ देखाउनुहोस्
Sochi / एडलर / एडलर / क्रिएटरमा एक अपार्टमेन्ट वा पाहुना हाउसको लागि राम्रो छ, र होटेल (म एकपटक "म काममा)" यात्रा गर्नुहोस् "। / LI> <
एक मुख्य पोइन्टहरू मध्ये एक (घरेलु पर्यटनले विदेशी पर्यटनलाई विदेशी-मूल्यहरू हराउँदछ र सेवाको स्तरमा अनुरूप छैन। तर यदि तपाईंलाई धेरै गैर-हार्ड प्रविधिहरू थाहा छ भने, मातृभूमिमा छुट्टी सस्तो र मा केस टर्मिया वा जर्जिया हुन सक्छ।
✓ ✓ ✓ atchics ITELSIC रिसोर्ट शहरहरू (कम्तिमा 1-20-20 किलोमिटर) को रूपमा छनौट गर्नुहोस्, जहाँ पूर्वाधारको रूपमा बढेको छ। (समुद्री किनारहरू र केन्द्रका शहरहरूबाट टाढा) ✓ प्रारम्भिक बुकिंग टर्चहरू प्रयोग गर्नुहोस् र यदि हामी तपाईंको शहरबाट गइरहेका छौं भने, आवासको लागत अधिकतम पार्नुहोस्, भाँडाको लागत अधिकतम पार्नुहोस्। अनमेडियनहरू बिना निजी क्षेत्रमा अपार्टमेन्टहरू
प्रत्यक्ष रूपमा बुकिंगको सबैभन्दा भरपर्दो तरीका। फ्रान्क फ्रापमा चलाउने कम संभावनाहरू, जब त्यहाँ भाडाको हाउरिंगको कुनै कारण छैन, वा यो नि: शुल्क छैन। के, हाय, यो एडिव मा यो एडिलर मार्फत खोज्न को लागी Udeo र फोन द्वारा खोजी को माध्यम बाट भएको थियो।
आवश्यक छ भने, बजेट र "क्रोधित" भएर रसिप कालो समुद्रमा आराम गर्नु राम्रो हुन्छ? प्राय: प्राय: सस्तो रिसोर्टहरूको बारेमा समीक्षा गर्दछ, गाउँहरू टानको तुलनामा देखिन्छन्। यस्तै प्रभाव लक्जरी होटेलको अभावका कारण कपडा हो हटेलको अभावका कारण मनोरञ्जन वालेट (आकर्षणहरू, रेस्टुरेन्टहरू, नाइटक्लबहरू, आदि)।)।
<< p> वस्तुगत रूपमा, कालो सागको रिसोर्टहरू समान अवस्थाको साथ लगभग उस्तै मूल्य छ। सस्तो सोचीमा आराम गर्न सकिन्छ, र एन्पामा, र यल्टाज़्याममा र यल्टा, र टपासेमा। हामीले माथि वर्णन गरेका छौं - र तल - तथ्यहरू - तथ्य ↓
को लागी • •00 रूबलहरु - <
• • कोठा (खाजा) ~ 200-300500 रूबलहरू
•aहप्ता (+ + + Bubly विकल्प) ~ 000000 रूबल विकल्पहरू
उच्च-गुणवत्ता परिवार होटलहरू सबै समावेशी र अल्ट्रा र अल्ट्रा प्रणालीहरू, बालबालिकाका क्लबहरू र एनिमेसन, सोचिमा फेला पार्न सकिन्छ, र अपराधमा फेला पार्न सकिन्छ। र, बाटोको आधारमा, कुनै पनि हालतमा "अन्तरिक्ष स्थानमा" मूल्यहरूमा। कालो सागरमा त्यस्ता होटलहरूको चयन - वारले बुलेटिनको समीक्षामा।
परिवारहरूसँगको परिवारहरू कालो समुद्री तटमा रूसी बीच रिसोर्टमा पर्यटकको मुख्य भाग हुन्। होटेल छनौट गर्दै, अभिभावकहरू मुख्यतया बच्चाको हितबाट निर्देशित हुन्छन्। खाद्य गुणवत्ता, पूर्वाधार प्रध, सेवाहरूको सम्बन्धित सेट - पाठ्यक्रमको। तर प्रश्न यो भन्दा कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन - र कसरी बच्चाहरूलाई रमाइलो, आकर्षक छ, र त्यसैले अभिभावकलाई आराम गर्न सक्षम हुनेछ।
"ATRESSER को हेराल्डहरू रसियाको दक्षिणमा रसियाको दक्षिणमा" सबै समावेशी "र रूसी कालो समुद्री तटमा तपाईंलाई सर्वोत्तम एनिमेसन" र रूसी ब्ल्याक एनिमेसनका लागि चयन गर्नुहोस्। भ्रमण अपरेटरहरूले प्रदान गरेको जानकारीको लागि धन्यबाद, र।
पूर्ण विवरण होटल र यसको फोटो ग्यालरी तपाईं होटल को नाम मा क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ - यो एक हाइपरलिंक हो।
पाठमा निर्दिष्ट अनुमानित मूल्य बिहान229 मा मात्र मान्य छ। तपाईंलाई आवश्यक पर्ने मितिहरू र सही संख्यामा भ्रमणको सही मूल्य गणना गर्न, "होटेलमा भ्रमणको मूल्य गणना गर्नुहोस्" - र पृष्ठमा राख्नु पर्ने प्यारामिटरहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
sochi निश्चित रूपमा यस गर्मी को सबैभन्दा लोकप्रिय बीच दिशा हो। र कुनै आश्चर्य छैन - रिसोर्टले सब भन्दा विविध छुट्टी पर्यटकलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ। यहाँ होटलहरू छन्, जुनमा आराम गर्नुहोस् जुन "टर्की" ढाँचाको एकदम नजिक छ। ती मध्ये धेरै कम छन्।
कालो समुद्री किनारमा पहिलो होटल, "सबै समावेशिक" प्रणालीमा अपरेटिंग। एनिमेटर्सको सबैभन्दा शक्तिशाली टीम, आराम र सेवाको उच्च स्तरको। बच्चाहरूको साथ आराम को लागी आदर्श। "प्रोमेटस क्लब क्लब" मा प्रत्येक पाहुनालाई ब्याजमा रुचि राख्छन्।
होटेलसँग to रेस्टुरेन्टहरू र4बारहरू, खाना - "सबै समावेशीहरू"। बच्चाहरू त्यहाँ ओछ्यानको ओछ्यानमा एक ज्याला हो, कुर्सीहरू, बच्चाको टेललरहरू। बच्चाहरूको लागि रेस्टुरेन्टलाई 1 वर्षका बच्चाहरूको लागि बच्चाको लागि दिइएको छ, दम्पतीका बच्चाहरूको लागि दम्पती, दुग्ध उत्पादनहरू, फलफूल, रखका लागि विशेष पकाएको आहार भाँडाहरू।
<< p> होटेलसँग बच्चाहरूको बाँकीको लागि अद्भुत पूर्वाधार छ। बिहान सबेरै बेलुका साँझदेखि नै बच्चाहरू खेलकुद घटनाहरू, मोबाइल खेलहरू र पुरस्कार र उपहारका साथ प्रतियोगितामा संलग्न छन्। आफैलाई हेर्नुहोस्: po पोखरी, चन्द्र पार्क, पानी पार्क, 10000 वर्ग मीटर। , डीवीडी सिनेमा, कार्यक्रम, डिस्को, गेमिंग मेसिन, बलिलिंग, टेबल टेनिस र बच्चाहरू को कोठा शिक्षकहरू सहित। थकित आमाहरू र ड्यासमा - विश्वभरि प्रक्रियाहरू सहित एक अद्वितीय स्पा केन्द्र।
अनुमानित मूल्य जून 1 , 201 2016 को लागी (10 दिन) समूह2ऊतीहरू + 1 बच्चा - 477 हजार रूबलहरू -। को लागी यात्राको लागि (आवास केवल एक उडान बिना)।
केवल परिवार एक मात्र परिवार रिसोर्ट, अल्ट्रा-सबै समावेशी प्रणालीमा काम गर्दै, र परिवार छुट्टी र पुन: प्राप्ति प्रस्ताव गर्दै। सबै उमेर समूहका बच्चाहरूलाई 12 बर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि छुटहरू प्रदान गर्दछ (जब एक अतिरिक्त ठाउँमा राखिन्छ: 1 12 वटा बच्चा -100%,
प्रणालीका लागि अनुरोधको 2020 मौसममा "सबै समावेशी" प्रणालीको लागि "रसिया र अबिथारियाको रिसोर्टमा, यो अझ बढी भयो, तर प्रायः पर्यटकहरू बिहानको खाजामा मात्र छनौट गर्छन्। हामीले टुर अपरेटरहरूको दायरामा कालो समुद्री तटमा नयाँ होटलहरू जम्मा गरेका छौं, दुबै सबै समावेशी र यो बिना नै। मूल्य र लिंकहरूको साथ हाम्रो पूर्वावलोकन पढ्नुहोस्।
रसियाको दक्षिणको रिसोर्टमा टूर अपरेटरहरू भनिएको छ, नयाँ ठूला होटलहरूले यस मौसममा थोरै खोलिएका छन्। मूल रूपमा सानो पाहुना घरहरू खोल्नुहोस्।
<< publy ठूला होटलहरू पनि नयाँ छन्, तर तिनीहरू प्राय: अर्को तरिकामा जान्छन्। पहिले नै अवस्थित होटलहरूले मालिकहरू वा व्यवस्थापन कम्पनीहरूलाई परिवर्तन गर्दैछन्, र यससँगको सम्बन्धमा, उनीहरूले पुरानो पर्यटक विकास गर्न र नयाँ नाम लिनको लागि नयाँ अवधारणा छनौट गर्छन्, र कहिलेकाँही नयाँ नाम। साथै, केही हालसालै रसियाको दक्षिणमा पहिलो पटक होटलहरू निर्माण गरिएको छ जुन यो वर्ष टेस्ट अपरेटरहरूसँग काम गर्न थालेको थियो - हामी तिनीहरूलाई नयाँ वस्तुहरूको लागि विचार गर्दछौं।
को लागि एक वा अर्को होटेल उपयुक्त छ, उनको अगस्ट 2020 को शुरुमा उसको "सबै समावेशी सहित (सबै समावेशी सहित) कति छ (सबै समावेशी सहित)?